by bashir farayare)(source of allbanaadircom)Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin) Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal- gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan. Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero Burcad Badeeda. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan Daahir Aweys. Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in wada noolaasho ay ka jirto Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado. Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari” oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono. Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys. Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan dhici doonin in ay soo weeraraan Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah. Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee iska soo horjeeda. Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo Ahlusuna ka tirsan. Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah. W/D: Wariye Maxamed Cabdullaahi Xassan. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders by bashir farayare)(source of allbanaadircom)Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin) Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal- gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan. Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero Burcad Badeeda. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan Daahir Aweys. Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in wada noolaasho ay ka jirto Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado. Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari” oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono. Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys. Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan dhici doonin in ay soo weeraraan Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah. Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee iska soo horjeeda. Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo Ahlusuna ka tirsan. Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah. W/D: Wariye Maxamed Cabdullaahi Xassan. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
by bashir farayare)(source of allbanaadircom)Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin) Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal- gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan. Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero Burcad Badeeda. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan Daahir Aweys. Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in wada noolaasho ay ka jirto Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado. Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari” oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono. Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys. Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan dhici doonin in ay soo weeraraan Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah. Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee iska soo horjeeda. Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo Ahlusuna ka tirsan. Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah. W/D: Wariye Maxamed Cabdullaahi Xassan.
Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta
dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku
kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin)
Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal-
gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay
maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la
oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney
Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan.
Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal
Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan
halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa
degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan
iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha
ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo
Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa
uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro
Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan
qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan
Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa
sheegay in wada noolaasho ay ka jirto
Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar
ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado.
Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari”
oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa
sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay
maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin
Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u
dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono.
Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna
ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin
iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku
sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys.
Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in
aysan dhici doonin in ay soo weeraraan
Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah.
Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in
magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo
adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku
sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee
iska soo horjeeda.
Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay
ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh
Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali
Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo
Ahlusuna ka tirsan.
Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku
haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa
xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah
oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee
ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah
balse kala Koox ah.
W/D: Wariye Maxamed Cabdullaahi
→ farayarenews )Daahir Aweys oo lagu wado in goordhow la keeno Muqdisho iyo ciidankii amankiisa oo … June 29, 2013 – Wararka laga helaayo magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Xibin iyo Xeeb ayaa waxa ay sheegayaan in maanta la filaayo in Muqdisho lasoo gaarsiiyo Xassan Daahir Aweys oo maalmihii tegay ku sugnaa halkaasi kadib markii isaga oo baxsad ah uu gaaray. Xassan Daahir Aweys oo ah nin in badan halgan siyaasadeed oo aan marnaba guuleysan ku soo jiray ayaa waxaa wararku sheegayaan in shalay lagaa dhaadhiciyaay in Muqdisho la keeno iyada oo loo diyaariyay ciida si gaar ah isaga u ilaali doona. Ciidamada loo diyaariyay ee amaankiisa la wareego doona ayaa waxaa la sheegay in ay yihiin ciidmada Sheeh Yuusuf Maxmed Siyaad (Indha Cadde) oo ay ka wada tirsanaa jireen ururkii Xizbul Islaam ee Shabaabku bur-buriyeen. Dad xog ogaal ah oo ku sugan Cadaado ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi ay kasoo duuli doonto diyaarad soo qaadi doonta Xassan Daahir, siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameeyo Habar-gidir ah oo la socda kuwaas oo garoonka Muqdisho kasoo degi doona. Xassan Daahir Aweys oo doon uga soo baxsaday Kismaayo kadib markii uu seefta gasha kala baxay Axmed Cabdi Godane ayaa waxa uu isu dhiibay Maamulka Xibin iyo Xeeb oo uu hogaamiyo nin ay kawada tirsanaa jireen ururkii Akhwaanul-muslimiin iyada oo maalmihii tegay oo dhan laga dhaadhicinayay in uu Muqdisho soo aado. Inkasta oo uu jiro guuxa ah in Xassan Daahir uu Muqdisho imaan doono ayaa hadana waxaan jirin masuul sare oo xaqiijiyay in arintaasi ay jiro oo safarka Xassan ee Muqdisho uu maanta ku beeganyahay
← by bashir farayare)(source of allbanaadircom)Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin) Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal- gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan. Cadaado ayaa waxaa ay hoy u tahay hogaamiyaal Sare oo ka tirsan Al-Shabab oo heyb ahaan halkaa ka soo jeedo, sidoo kale waxaa halkaa degen Masuuliyiin maamulka Ahlusuna ka tirsan iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb, Horjoogayasha ugu Tunka weyn Kooxa magacooda loogu yeero Burcad Badeeda. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Ximin iyo Xeeeb Korneel C/ Maxamed Axmed ayaa waxa uu sheegay in xeer wada noolaasho uu ka jiro Cadaado kaasi oo uu sheegay in uusan qabaneyn dad uu tusaale uga soo qaatay Xasan Daahir Aweys. Sidoo kale Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in wada noolaasho ay ka jirto Deegaanada maamulka Ximin iyo xeeb gaar ahaan xarunta maamulkaas ee Cadaado. Sheekh C/risaaq Maxamed Cali Mire “Ashcari” oo ah U hadle Maamulka Ahlusuna ayaa sheegay in maamulka Ximin iyo Xeeb uu yahay maamul eedeysane ah soona dhaweeyay Nin Dabiile gacan ku dhiigle ah sida uu hadalka uu u dhigaye, sheegayna in lala xisaabtami doono. Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys. Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ximin iyo Xeeb C/ Maxamed Axmed ayaa sheegay in aysan dhici doonin in ay soo weeraraan Ahlusuna ayna yihiin maamul Xigaale ah. Masuul ka tirsan Ximin iyo Xeeb oo Diiday in magaciisa iyo Codkiisa war-baahinta loo adeegsado ayaa Sheegay in in cadaado ay ku sugan yihiin dhicayada dalka intooda badan ee iska soo horjeeda. Sidoo kale sargaalka ayaa sheegay in cadaado ay ku sugan ama xiliyada qaar ay tagaan Sheekh Xasan Afrax oo Shabab ka tirsan, Xasan Cali Gees iyo Masuuliyiin kale oo burcad badeeda iyo Ahlusuna ka tirsan. Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah. W/D: Wariye Maxamed Cabdullaahi Xassan.